Mayelana Nathi - Shenzhen Manke Technology Co., Ltd.
Inkampani Shenzhen Manke Technology Co., Ltd.
Selokhu inkampani yethu yasungulwa e-Shenzhen ngo-2013, Sigxile kakhulu kwi-R&D kanye nokukhiqizwa kwama-scooters kagesi ezokuthutha ezihamba amabanga amafushane naphakathi. imikhiqizo idayiswa emazweni angaphezu kuka-80 nasezifundeni emhlabeni jikelele. Futhi kukhombisa ukukhula okusheshayo unyaka nonyaka.
Ngokusekelwe ekuhlangenwe nakho okucebile ekukhiqizeni nasekuthuthukisweni kwama-scooters kagesi eminyakeni edlule, sivule inkomba entsha sha yokuthuthukiswa kanye nokukhiqiza egxile kumthengi osezingeni eliphezulu, osebenza kahle kakhulu kanye nezikuta zikagesi ezabelwana ngazo. Kusukela lapho, uMankeel usephinde waba wumkhiqizo wethu omusha wesithuthuthu sikagesi. Ukuhlanganisa isisekelo esijulile sesikhathi esedlule, kodwa futhi sibheke phambili ekusaseni elibanzi.
iminyaka yokuhlangenwe nakho kokukhiqiza kochwepheshe
Ilungelo lobunikazi lokusungulwa kwasekhaya
Ukugunyazwa kwelungelo lobunikazi lokusungulwa kwamazwe ngamazwe
I-Shenzhen Manke Technology yibhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu elitholakala e-Shenzhen, idolobha lokusungula izinto ezintsha. Sigxila ekubeni umkhiqizi ochwepheshile wezithuthuthu zikagesi kusukela ngo-2013. Ngemva kweminyaka yokuthuthuka, siphumelele ubuchwepheshe bethu obuyisisekelo kanye namazinga aphezulu embonini.
I-Mankeel ingumkhiqizo wochungechunge olusha oluzimele locwaningo nokuthuthukiswa kwe-scooter kagesi ngaphansi kwenkampani, evula isigaba esisha sokuthuthukiswa komkhiqizo ngekhwalithi ephezulu nokusebenza okuphezulu njengokuqondiswa kwethu. Inkampani ibilokhu inamathela ezimisweni zebhizinisi zobuqotho, ukusungula izinto ezintsha, ikhwalithi, nokwamukela ushintsho ukuze inikeze isevisi engcono kakhulu kozakwethu namakhasimende.
Isithuthuthu sethu sokuqala sikagesi sohlobo lwe-"Mankeel" ukubonakala kwaklanywa ithimba le-Porsche, futhi isikuta sikagesi sesibili saklanywa futhi sakhiqizwa ngokuqinile ngokuvumelana nezindinganiso zokuphepha zaseJalimane. sinaka ukubukeka okuhle komkhiqizo kanye nokusebenziseka kalula, Okwamanje, ukuphepha komkhiqizo bekulokhu kuyinto ehamba phambili emsebenzini wethu we-R&D. futhi sisebenzise umqondo wokugibela okuphephile ekwakhiweni nasekukhiqizeni umkhiqizo wethu. Amanye amamodeli amaningana ahlukene nawo ayathuthukiswa futhi wethulwa, Imikhiqizo emisha eminingi iyathuthukiswa njengamanje. sigxila kuyo yonke imininingwane, sihlose ukukudalela ithuluzi lezokuthutha eliluhlaza nelibushelelezi.
Siyakwamukela ukujoyina iqembu le-Mankeel electric scooter ukuze ube nokunethezeka nenjabulo eyengeziwe endleleni yakho yokuhamba enekhabhoni ephansi!
Jabulela uhambo lwakho oluluhlaza nolushelelayo ngezithuthuthu zikagesi ze-Mankeel
Iba inkampani edume umhlaba wonke
Iphupho ngekusasa, ikhasimende kuqala
Ubuqotho, ukuqamba okusha, ikhwalithi, ukwamukela ushintsho
Umlando wokuthuthuka wenkampani
Amamodeli amathathu amasha azithuthukisile futhi akhiqiziwe abe yimpumelelo
yethulwe emakethe ngamaqoqo, futhi yathola eziningi ezinhle
impendulo evela kumakhasimende ethu emhlabeni wonke.
Imikhiqizo eminingi emisha ethuthukisiwe ihlanganisa izikuta zikagesi ezingekho emgwaqeni
iphrojekthi isetshenziswa ku-R&D futhi ikhiqize.
IMankeel Factory ithole umzuliswano omusha we
Brand imikhiqizo self-athuthukile babe
uphumelele izitifiketi ze-CE, FCC, TUV
Sibhalise ngokusemthethweni uhlobo olusha--Mankeel
Imikhiqizo ye-Mankeel idayiswa ngaphezu kuka-80 phesheya kwezilwandle
Ngawo lowo nyaka, intela yonyaka yebhizinisi kaMankeel
inkokhelo yeqe esigidini esisodwa
Imikhiqizo emisha engu-3 ye-Mankeel ithole okuningi
ukusungula amalungelo obunikazi ekhaya naphesheya
Ifekthri yokuqala ye-Mankeel ebonakalayo yaqedwa ngokusemthethweni
futhi isetshenziswe esifundeni saseGuangming, eShenzhen
Imikhiqizo ye-scooter kagesi ye-Mankeel
uthole isitifiketi se-ECO
Imikhiqizo ye-Mankeel yethulwe ngempumelelo futhi yathengiswa
ngamaqoqo ezinkundleni ezinkulu zasekhaya nezangaphandle
IMankeel yasungulwa eShenzhen, eChina, ingqopha-mlando yokuqala
imboni yezokuvakasha ehlakaniphile ngaphansi kukaMankeel isibeke isisekelo
Indaba Yomkhiqizo kaMankeel
Igama lethu lomkhiqizo---I-Mankeel iwukuhunyushwa kwegama Lenkampani YaseShayina i-Manke, futhi i-Manke isuselwa kufilosofi yebhizinisi ewumongo kanye nesiqondiso senjongo yethu yebhizinisi, okungukuthi, "Iphupho ngekusasa, amakhasimende kuqala".
Ukuma komkhiqizo we-Mankeel kuwumkhiqizo wezokuthutha ohlakaniphile wethuluzi lokuhamba lebanga elifushane nelimaphakathi. Ngokusekelwe emakethe yomhlaba wonke enebhizinisi lamazwe ngamazwe, sigxile ekunikezeni abantu ithuluzi lokuhamba lomuntu siqu elinobungani nemvelo. Izidingo zekhasimende nolwazi kuyizinto zokuqala zokucatshangelwa ekuthuthukisweni komkhiqizo wethu. Izidingo zekhasimende zimele izidingo zemakethe. Futhi isidingo semakethe siyisidingo samathrendi aluhlaza kuyo yonke imboni yethu yabantu yokuhamba amabanga amafushane.
Siphinde sibheke ikusasa elikude ukuhola emisha kanye nokuguqulwa kwemikhiqizo yezokuthutha ehlakaniphile yebanga elifushane, futhi sihlale sinikeza abathengi izinto ezintsha, imikhiqizo yekhwalithi ephezulu, sisebenza kanzima njalo ukuze siphakamise izixazululo ezingcono zokuhamba kwabantu, senze izimpilo zabantu zibe lula, futhi ukwenza ithrafikhi yethu ihambisane nemvelo.
Sithemba ukuthi uhambo lwakho luzokhululeka futhi lube lula ngenxa kaMankeel. Jabulela uhambo lwakho lweGreener & Smoother noMankeel.
Imikhiqizo ye-Mankeel&Quality Certification
I-Mankeel International Warehouse
Ukuze sinikeze usizo ozakwethu kanye nabathengi kangcono nangesikhathi esifanele, simise izindawo zokugcina izimpahla ezizimele ezingu-4 phesheya kanye neziteshi zokulungisa ezihambisanayo ngemva kokuthengisa e-USA, UK, Germany, nase-Poland. Ngesikhathi esifanayo, sihlela ukuba nezindawo zokugcina izimpahla eziningi zaphesheya kwamanye amazwe nezifunda. Ngoba singahlinzeka ozakwethu ngezinsizakalo zokulungisa ezisebenza kahle nezicabangelayo zangemva kokuthengisa. Futhi izinsizakalo zokuthumela nge-drop shipping ziyatholakala uma unezidingo zalokho. zonke izinsiza ezisekelayo ezingakunikeza isevisi efike ngesikhathi kuwumsebenzi wethu.